मिसाइल हमलामा ८० अमेरिकी सैनिक मारिएको इरानको दाबी | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २३ पुष २०७६, बुधबार १२:५७ लेखक नेपाली जनता
इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा ८० अमेरिकी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ। सरकारी टेलिभिजन इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान ब्रोडकास्टिङले इस्लामिक रिभोलुसन गार्डस् कोर्पसको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै कम्तीमा पनि ८० अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाएको जनाएको छ।
‘हाम्रो घटनास्थलमा भएका स्रोतको रिपोर्टका अनुसार कम्तीमा पनि ८० अमेरिकी सैनिक मारिएको र २०० भन्दा बढी घाइते रहेका छन्,’ इस्लामिक रिभोलुसन गार्डस् कोर्प्सलाई उद्धृत गर्दै तेहरान टाइम्सले लेखेको छ,‘घाइतेलाई तुरून्तै एयरबेसबाट हेलिकप्टरको सहायतामा स्थानान्तरण गरिएको छ।’
मिसाइल हानिएको एन अल-असाद एयरबेस अमेरिकाका लागि रणनीतिक अड्डा थियो जहाँबाट ड्रोनलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रयोग गरिएको थियो।
बुधबार इरानले अमेरिकी सेना बस्ने इराकको एन अल-असाद र इरबिलस्थित सैन्य अड्डामा दर्जन बढी मिसाइल आक्रमण गरेको थियो।
गत शुक्रबार अमेरिकाले ड्रोन हमलामा आफ्ना सैन्य प्रमुख कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि इरानले आजको हमला गरेको हो।
हमलाबाट साँच्चै कति क्षति भएको हो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टी हुन सकेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मिसाइल हमलाबाट केही नभएको बताएका छन्।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्- अल इज वेल! इराकका दुई सैन्य अड्डामा इरानबाट मिसाइल आक्रमण भएको छ। आक्रमणबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको अध्ययन हुँदैछ। अहिलेसम्म सबै ठीक छ। हामीसँग अहिले संसारकै सबैभन्दा बलियो र शस्त्रले सुसज्जित सैनिक छ। यसबारे म भोलि बिहान प्रतिक्रिया दिनेछु।
यसअघि ट्रम्पले इरानले आफ्ना नागरिक र सम्पत्तिमाथि हमला गरे इरानका ५२ साँस्कृतिक महत्वका स्थानमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
कस्ले हाे मन्त्रीद्वयको सम्बन्धमा फाटो ल्याउने ?
काठमाडौं । पूर्वमाओवादी निकटका मन्त्रीहरूबीच आजकाल बोलचाल नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पूर्वएमालेका मन्त्रीहरूले भन्दा राम्रो काम…
अख्तियारको तीन लाख गायब ?
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई नै झुक्याएर तीन लाख घुस गायब बनाउने उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास…
काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको अभिभावकलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छनोट गर्र्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले सम्बन्धित…
प्रचण्डको अडानले पार्टी एकीकरण निष्कर्षमा पुगेन
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकीकरणलाई निष्कर्षमा पुयाउने विषयमा दुवै पार्टीका अध्यक्षबीच आज वार्ता भए पनि…
दशैंलाई लक्षित गरी चोरी नियन्त्रण र सवारी जाम कम गर्न नागढुङ्गा-खानीखोला खण्डमा अस्थायी चौकी
काठमाडौँ। नागढुङ्गा-खानीखोलामा सडक खण्डमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको छ ।
चाडबाड नजिकिएसँगै नाकामा हुने चोरी नियन्त्रण र सवारी जामलाई कम…
आयल निगम घोटालाः गोपाल खड्कालाई उन्मुक्ति दिने तयारी
काठमाडाैं । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको नेपाल आयल निगम जग्गा खरिदमा संलग्न आरोपितलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिन…